Patricia Arquette ku Star muApple TV + Mutsva Mutsva "High Desert" | Ndinobva mac
Patricia Arquette Kutamba Nyowani muNew Apple TV + Series "High Desert"
Apple inoramba yakazvipira kuwedzera yayo yekupa terevhizheni yayo yekushambadzira vhidhiyo chikuva Apple TV +. Uye semari haashaye, nekuti hazvimutorere mari shoma kuchengetedza kodzero dzemitambo mitsva inouya pamusika. Ben Stiller Iye ndomumwe wevaye vanokwiza maoko avo nacho, sezvo achangotengesa yake yechipiri akateedzana mumwedzi mishoma kune avo veCupertino.
Apple ichangobva kuzivisa kuti yakachengetedza kodzero yechikamu chitsva chinonzi «Denga Guru»(Tichaona madudziro avakaita zita rekuti Spanish) rakaburitswa nemutambi anonyanya kuzivikanwa Ben Stiller, uye nyeredzi Patricia Arquette.
Apple nezuro yakazivisa nhepfenyuro nyowani iyo ichakurumidza kuratidzwa paApple TV + inonzi "High Desert." Iyi purogiramu inogadzirwa naBen Stiller, uye mutambi anozivikanwa Patricia Arquette achava protagonist.
Iyo kambani yakatsanangura kuti Patricia Arquette achange achitarisira kuita nyeredzi mu (uye zvakare kubatanidza-kugadzira) nyowani nyowani inoteedzana inonzi "High Desert" yeApple TV +. Ben Stiller haangogadzirise chete, asi zvakare achatungamira chikamu chekutanga. Apple Studios ichave iri imwe yevanogadzira vadyidzani veiyo nyowani nhevedzano, hafu nekambani yekugadzira Stiller's Red Hour Mafirimu.
Iwo akateedzana akavakirwa pamunhu anonzi Peggy, akatamba naArquette. Iye aimbova muropa uyo anosarudza kutanga patsva mushure mekufa kwamai vake vaaida, vaaigara navo mutaundi diki muYucca Valley, California. Mushure mekufa, iye anosarudza kuchinja hupenyu hwake uye anova a muongorori wega.
"High Desert" yakanyorwa naNancy Fichman, Katie Ford, naJennifer Hoppe. Ivo zvakare chikamu chekugadzirwa kweprojekiti nyowani. Apple haina kuzivisa iyo zuva rekutanga, kana ivo vachazogona kutiratidza isu karavhani yekutanga yeakateedzana. Tichave takatarisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Patricia Arquette Kutamba Nyowani muNew Apple TV + Series "High Desert"